Victor Mee Auctions Irish Whiskey Collectables Yamadivayisi | Irish Whiskey .com
Ikhaya » Irish Whiskey Izindaba » Victor Mee Auctions Irish Whiskey Collectables Yamadivayisi
316 0 Irish Whiskey Izindaba, Irish Whiskey Cindezela Ukukhishwa, Redbreast
UVictor Mee Auctions umemezele ukuthengiswa kwayo kokuqala kwe 2020, I-Pub Memorabilia ne-Ireland Whisky Collectables Sale, okulindeleke ukuba yenzeke eCloverhill saleroom ngoLwesithathu 29th Januwari.
I-Pub memabilia namaqoqo aqoqiwe asetshenziselwe ukushaya indali yeVictor Mee block yokuthengisa okokuqala konyaka
Ukukhipha unyaka omusha ngenye yezindawo zabo abaziwayo kakhulu bobuchwepheshe, iqembu laseVictor Mee Auctions limemezele ukuthengisa kwabo kokuqala 2020, the Pub Memorabilia kanye Ukuqoqa Amaqoqo, okulindeleke ukuba yenzeke egumbini lokuthengisa eCloverhill ngoLwesithathu 29th Januwari.
Uthando lomsizi wendali uVictor Mee, I-pub Memabilia isheshe yabonwa njengeyisipesheli, itimu ephindaphindwayo endlini endalini yaseCavan, ngentengiso ye-pub memabilia okufakazela ukuthi ungomunye wezentengiso ezaziwa kakhulu nezitholakala kakhulu kuwo wonke unyaka, nabaqoqi abazinikezele abaya eCavan ukuze babe khona egumbini lokuthengisa futhi baxhume ngocingo naku-inthanethi kusuka emhlabeni wonke.
I-Pub Memorabilia ne-Collectables ezithengiswayo ezayo izoba nezingcezu zezingcezu ezinhle kakhulu nezingaqoqwa kakhulu ezihanjiswe eqenjini leVict Me Me Auctions ngohlu lwabaqoqi nabahwebi base-Ireland abahlonishwayo. Uthathwa ekhetheke kakhulu ngumsizi wendali uVictor Mee nendodana yakhe uBryan, inkatho eningi obekufanele ivele igcinwe ngokuphephile ngaphakathi kwendali ukuze kwethulwe abakhokhisa imali ngokuthengiswa kuphela kuJanuwari, ngezingcezu eziningi eziqinisekisiwe ukuheha ukunakwa kwabathengi abavela emhlabeni wonke.
I-Pub memabilia ifiswa kakhulu, ikakhulukazi yilabo phesheya abafisa ukuletha isiqephu sememorali yangempela yase-Ireland ekuziqalekeni kwabo. Izindawo ezinemikhiqizo yamagugu omhlaba owaziwa kabanzi nge-Ireland kufaka phakathi iGuinness, Jamesons, UMurphy's, futhi uPaddy ungenye yezinto ezaziwa kakhulu, futhi izingcezu eziyiqiniso zineqhaza kuma-ambiance emakhaya, imigoqo kanye nama-pubs futhi ngokuvamile kubhekwa njengokufiseleka kakhulu ngabaqoqi bempahla yabanikazi nabanikazi abanethemba lokuletha umuzwa wobuqiniso ku-Irish pub phesheya.
I-Pub Memorabilia and Collectables sale kulindeleke ukuthi ibambe inzalo ephezulu, kuholele kumabhidi aphezulu, enomlando omningi wase-Ireland obonisa phakathi kwezinye okungajwayelekile ukuthi iqembu likaVictor Mee Auctions selike lathola.
Izibuko Zentengiso zase-Ireland
Izibuko zokukhangisa ziyintandokazi eqinile ngababhikishi eVictor Mee Auctions futhi ziyindlela enhle yokwengeza uhlamvu oluthile lwendabuko kunoma yiliphi ikhaya, ibha noma i-outhouse. Indali ezayo izofaka izibuko zama-whisky amnandi nezibuko zenkanyezi nenkanyezi yombukiso oyisibuko sokukhangisa seShamrock Whisky, kwagxilwa futhi kwafakwa ngesandla nguKirker noGraner waseBelfast ku 1910. Enye yezibuko ezingavamile kakhulu zokukhangisa uVictor Mee azibonile emakethe kuze kube manje, le ndatshana inikezwe isilinganiselo ngumthengisi ukuthi ayithengise phakathi kwe-emangalisayo ye-5,5 000 kuye ku- € 10,000 futhi ifaka ukuphrinta kwe-Shamrock lady enkabeni yesibuko, ukubhala ngokubabazekayo okunomfanekiso futhi kwahlanganiswa ngohlaka lwamapulangwe olubunjiwe ngesandla. Isibuko sihlanganisa nelebuli ye 'Veritor', okwakungumkhiqizo ukuthi ekuqaleni kweminyaka ye-1910 kwakuthengiswa amaShamrock kanye neminye imihlobo emithathu yase-Ireland; UMitchell's Holly, ICorbett's 3 inkanyezi neTrisconnel 3 inkanyezi.
Ngaphezu kwesibuko seShamrock Whisky, Abafuna ukukhokhisa imali enesabelomali sokubhida esisezingeni eliphansi bazothola nethuba lokuthatha ekhaya i-Will's Gold Flake Cigareindows Advertising Pillar Mirror kanye nePaddy Whiskey Cork distillery Advertising Mirror, bobabili abathandana babuyela ekuqaleni 20th ikhulu leminyaka, nesibuko se-whisky esilinganiselwa ukuthengisa endalini phakathi kwe- € 2 500 ne- € 4,500.
Ukukhangisa kwePublican ingqikithi esebenzayo eVictor Mee Auctions, kodwa iqembu liphinde labona ukukhula kokuthandwa kwezicucu ezi-quirky nezihlekisayo ezentengiswaneni zokukhangisa kanye nezememory. Isibonelo esisodwa esivelele ekuthengisweni okuzayo sibonisa iSensible Man Sign, isikhangiso sikaCrow Bar ugwayi, kufaka umlungu 'okwazi okungcono futhi aphikelele kukho'. Le ngxenye iyisibonelo sokukhangisa abathengi ababengeke basibone namuhla, kepha lenzela ucezu lwengxoxo oluhle, lulela iso phakathi, futhi ifundise ngesikhathi esidlule somkhangiso wase-Ireland.
Ephawula ekuqoqweni kwezingcezu zokukhangisa ezizonikelwa kubadayisi bendali, Kusho uVictor Mee:
“Izibuko nezimpawu zokukhangisa kuhlale zilethe isizumbulu esikhulu senzuzo evela kubafundi ababhide emhlabeni jikelele. Izibuko zokukhangisa ezinjengalezo ezibanjiswa kulendali zifunwa kakhulu ngabaqoqi. Ngesikhathi sokukhiqiza, kwakubiza kakhulu ukukhiqiza futhi kwakuvame ukufakwa emgodini, edinga amakhono akhethekile ukupenda - bayisibonelo sangempela sobuciko ekukhangiseni. ”
“Ukuntekenteka kwengilazi kusho ukuthi izibuko eziningi zokukhangisa azikaze zisinde eminyakeni selokhu zenziwa, okusho ukuthi okusele 'kugxiviwe' ngokungabodwa nokutholwa okufiswa yibo bonke abaqoqi. Siyaziqhenya kakhulu ngokukhetha izibuko eziningi, konke kusesimweni esiphilile, futhi silindele ukuthi lokhu kuzokhuphula inani nentshisekelo kule nkatho ehlukile. ”
Uhlu oluyiqiniso lwama-Irish Collectables
Ukuthengiswa okuzayo eVictor Mee Auctions kuzophinda kube nezinto eziningi eziqoqiwe ngokumangalisayo ezigcinwe kwezinye zezindawo zokuthengisa nezimboni ezikhethekile zase-Ireland. Kuqoqwa, intandokazi eqinile yendlu yendali ukushaya indali block 29th NgoJanuwari kuyisidakamizwa sika-Ogden's Cigarette Dispenser esivela emuva ngawo-1890s. Ucezu lucatshiselwa ukuthi luthengiswe ngemali ephakathi kwe- € 2 500 kanye ne- € 4,500. Lezi zisabalalisa zazivame ukutholakala kuphela ezitolo zemfashini kakhulu futhi zazizosebenzela abathengi abasezingeni eliphakeme kakhulu.
Ngokungeziwe ku-Ogden's Cigarette Dispenser, ukuthengiswa kukaJanuwari eVictor Mee Auctions kuzophinde kukhombise namanye amaLot ahlanganisiwe kubandakanya neFrys Chocolates Display yeKhabhinethi enesibuko phezulu. Le khabethe lokubonisa ingesinye isicucu esiphakeme sesitolo sangaphambilini esifanelekile kusukela ngekhulu lama-20 leminyaka esasihlala phezulu kwekhawunta yesitolo futhi samema abathengi ukuba baziphathe ngokwabo ngokuzalwa okukhulu.
Ingxenye yokuheha yalesi sabathengi yilokhu okuhamba phambili okukhulu okwenziwe ngengilazi ebekiwe. Amakhabethe amaningi okubonisa avela kule nkathi angaba nemidwebo eyenziwe ngengilazi yobisi. Lokhu kwehluka ngesitayela kunomthelela ekuhlukaniselweni kwalesi sabelo kanye sikhulu kunosayizi ojwayelekile nendawo ezungezwe kahle ngokhuni.. Ngamashalofu amathathu angaphakathi, ikhabethe lizungezwe ingilazi ekhanyayo emakwe ngejazi lezingalo, “Ngokuqokwa Okubaluleke Kakhulu”. Izinkuni ziyafakwa futhi phansi ngokubhala ngegolide ngesithonjana senkampani u- “J.S. Mfowethu & SONS LTD ”uphawu lwentengiso futhi silindele isasasa elikhulu kule nkatho ethile ku- 29th Januwari.
Okunye okunye kulokhu okuthengisiwe okulindeleke ukuba kuqoqe inzalo eningi kubathengi isimo sendabuko sobhedu i-whisky yase-Ireland namanje. Ukwenza isengezo esihle sokuhlobisa noma iphuzu eligxile kubha noma ekuhlanzeni, ngokunikina ikhanda ngezindlela zesikhathi esedlule zokunciphisa, UVictor Mee Auctions ubeke isilinganiso esingu- € 600 kuye ku- € 1,200 kucezu lolu.
Ngokuhambisana nengqikithi ye-whisky, Iqoqo elihle kakhulu lamabhodlela e-whisky ayisithupha ka-1960 ama-Red Breast aneminyaka engu-12 ubudala kulinganiselwa ukuthi athengiswe phakathi kuka- € 250 no- 4 450 lilinye azotholakala kubathengi abanentshisekelo. Iqoqo le-whisky ye-vintage isithathiwe kusuka endaweni yakudala eyaziwa ngokuthi yiJameson Whiskey ku-Bow Street evale kuyo 1971 futhi yathuthela eMiddleton, Cork.
Iqembu likaVictor Mee likholelwa ukuthi la mabhodlela afakwa ebhodleleni ngawo-1960 futhi aneminyaka eyishumi nambili kumakhasino aseGilbeys sherry. Ukukhiqizwa kweRedbreast kwaqedwa nguGilbeys ku 1985 ngaphambi kokuba uphawu lwenziwe kabusha emakethe ekuqaleni kweminyaka yama-1990s okusho ukuthi amabhodlela angafakwanga asesimweni esihle akuvamile kakhulu ukuthola emakethe yanamuhla.
Ubeka amazwana ngokuthengisa okokuqala kukaVictor Mee Auctions 2020 Kusho uBryan Mee,
“Ngemuva kokuphumelela 2019 endlini endalini sijabule kakhulu ukubona ukuthi ishumi leminyaka elisha eVictor Mee Auctions lisibekele ini kanye namakhasimende ethu. I-Pub Memorabilia yethu kanye nokuQongelela Ukuthengiswa kulindeleke ukuthi kudonsele intshisakalo enkulu kubathengi bendawo nabakwamanye amazwe, mhlawumbe nginethemba lokuthi ngizokhipha imigoqo ehlukahlukene kanye nezikhungo ngesikhumbuzo sangempela sase-Ireland ekhaya nakude. ”
Ngeminye imininingwane ngeVict Mee Auctions 'ezayo iPub Memorabilia namaCollegiti ngoLwesithathu 29th NgoJanuwari noma ukubuka ukuvakasha kukhathalogi online www.victormeeauctions.ie.
I-Whisky yase-Dunville i-Whisky iwina imiklomelo emihlanu yomhlaba wonke
Amathegi: Ama-Gilbeyswhiskey IrishIrish Whiskey BlogIrish Whiskey IzindabaRedbreast Irish WhiskeyStuart McNamaraVictor Mee AuctionsWhisky Auction